UMahumapelo uzoqhubeka nokusebenza njengondunankulu - PEC | News24
UMahumapelo uzoqhubeka nokusebenza njengondunankulu - PEC
Isigungu esiphezulu se-ANC eNorth West siyalele uNdunankulu uSupra Mahumapelo ukuba ahoxise ukwesula kwakhe esikhundleni salokho athathe ikhefu eliyisipesheli.
Lokhu kulandela imizuzu embalwa uMahumapelo ekhulume nabalandeli bakhe ngemuva komhlangano waveza ukuthi akayi ndawo.
I-PEC esifundazweni idalule ukuthi kuzoqokwa undunankulu wesikhashana ozobambela uMahumapelo, yathi izoqhubeka nokuxhumana ne-NEC ngalolu daba.
UMahumapelo ngoLwesithathu ekuseni ushaye ingwiji kulandela isithembiso sakhe asenzile sokuthi uzokwesula esikhundleni namhlanje emini, wathi uzolinda isigungu esiphezulu se-ANC esifundazweni kube yiso esenza isinqumo ngekusasa lakhe.
Le nhlangano eNorth West ibambe umhlangano ophuthumayo wesigungu esiphezulu, eMahikeng, ngenhloso yokudingida ngodaba lukaMahumapelo.